Haddii aad rabto si ay u ururiyaan xogta ee da'da digital, waxaad u baahan tahay in ay ogaadaan in aad ku tartamaya muddo dadka iyo dareenka. Markan iyo dareenka waa cajiib qiimo aad u, waa wax xumu ee cilmi-baarista. saynisyahano badan ayaa bulshada caadaysteen in ay la dhigaayo cilmi ee dadka xad maxaabiis, sida undergraduate in shaybaar campus. In goobaha kuwan, baahida cilmi xukumaan, iyo Raaxo ee ka qaybgalayaashu ma aha mudnaan sare. In cilmi da'da digital habkan ma aha waarta. Ka qaybgalayaashu waxay inta badan waa jidh fog ka cilmi iyo xidhiidhka ka dhexeeya labada waxaa inta badan dhex dhexaadin by computer ah. goob Taas macnaheedu waa in cilmi ayaa ku tartamaya dareenka ka qaybgalayaashu 'oo sidaas daraaddeed waa inay abuuraan waayo aragnimo dheeraad ah ka qaybgale xiiso leh. Taasi waa sababta in cutubka kasta oo lug la dhaqanka ka qaybgalayaasha, waxaannu aragnay tusaalayaal waxbarashada qaatay hab qaybgale-xuddun in xog ururinta ah.
Tusaale ahaan, Cutubka 3, waxaannu aragnay sida Sharad Goel, Winter Mason, oo Duncan Watts (2010) abuuray kulan la yiraahdo Friendsense in dhab ahaantii ahaa jir xariif ku wareegsan sahan aragti. In Cutubka 4aad, waxaannu aragnay sida aad u abuuri karaan eber xogta qiimaha variable by dhigaayo tijaabo in dadka dhab ahaan doonayaan in ay noqon, sida tijaabo ah dajinta music aan abuuray Peter Dodds iyo Duncan Watts (Salganik, Dodds, and Watts 2006) . Ugu dambeyntii, cutubka 5, waxaannu aragnay sida Galaxy Zoo abuuray iskaashiga mass in dhiiriyo in ka badan 100,000 oo qof in ay ka qayb ubadan ah (in labada kaskooda erayga) hawsha image calaamadeynta (Lintott et al. 2011) . In kasta oo kiisaskan, cilmi diiradda on abuuraya waayo-aragnimo fiican oo ka qayb-galayaasha, oo ay dhacdo in kasta oo, hab ka qaybgale-xuddun this awood nooc oo cusub oo cilmi-baaris.
Waxaan filayaa in mustaqbalka, cilmi-sii wadi doonaa si ay u horumariyaan hababka in xog ururinta in ku dadaalaan si ay u abuuraan a-aragnimo user wanaagsan. Xusuusnow, in da'da digital, ka qaybgalayaashu waa mid ka mid click ka video ah oo eey skateboard ka tagayo.